အမျိုးသမီးများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသမီးများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများ
ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်ရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများလည်း ရှိနေပေသေးသည်။ ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးခြင်းများကပင် အချို့ရောဂါများ (ဥပမာ - ရင်သားကင်ဆာ) အတွက် သတိပြုဖွယ်ရာများဖြစ်လာပြီး အသက်အန္တရာယ်မှပင် လွတ်မြောက်နိုင်ပါသည်။
မိမိရင်သားကို မိမိဘာသာမှန်မှန်စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် တစုံတရာထူးခြားမှုရှိပါက ဆရာ၀န်နှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်း၍ ရင်သားတွင်အချိုင့်ရာ ရှိ/မရှိ၊ နီမြန်းခြင်း ရှိ/မရှိ၊ နို့သီးခေါင်းအနေအထားအပြင် ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးတွင် ထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ရာ ရှိ/မရှိကို သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ထို့နောက်တွင်လှဲချ၍ သင်၏ညာဘက်လက်မောင်းကို ဦးခေါင်းကိုကျော်၍ မြှောက်ပါ။ ဘယ်ဘက်လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ်နှင့် လက်သန်းကြွယ်တို့ကိုအသုံးပြု၍ ညာဘက်ရင်သားကိုချိုင်းအောက်မှစ၍ စမ်းသပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်ကိုလည်း ဤကဲ့သို့ပင်ပြုလုပ်ပါ။
2. ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
ခုခံအားကျဆင်းစေသော ဗိုင်းရပ်စ် (HIV)သည် ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ဖြစ်စေနိုင်သော ပိုးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းပိုးရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်မှာ အရေးကြီးလှပါသည်။
နှလုံးရောဂါသည် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများထဲတွင် အဆိုးရွားဆုံးတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ဆုံးရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် မိမိနှလုံးခုန်နှုန်းကို မိမိဘာသာအမြဲမပြတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ၎င်းအန္တရာယ်များကို ကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
သင်၏သွေးခုန်နှုန်းကို စမ်းသပ်ရန်လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ်ကို လက်မအောက်ဘက်ရှိ အတွင်းဘက်လက်ကောက်၀တ်ပေါ်သို့တင်ပါ။ သွေးခုန်နှုန်းကို တစ်မိနစ်ပြည့်အောင်ရေတွက်ပါ။ ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်သည် တစ်မိနစ်လျှင် နှလုံးခုန်နှုန်း 60 မှ 100 ကြားရှိလေ့ရှိသည်။ အလွန်မြန်နေခြင်း (သို့) အလွန်နှေးနေခြင်းအပြင် သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာခံစားရပါက ဆရာ၀န်နှင့်ချက်ချင်းသွားရောက်ပြသပါ။
4. ဆီးလမ်းကြောင်းပိုး၀င်ခြင်းကို စမ်းသပ်ခြင်း
ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ မကြာခဏပိုး၀င်ဖူးသူတစ်ဦးသည် ၎င်းရောဂါလက္ခဏာများ (ဆီးသွားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဆီးပူခြင်း) နှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိနေပေလိမ့်မည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သည်ဟု သံသယရှိပါက ဆီးစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာကို ဆေးဆိုင်မှ အလွယ်တကူ၀ယ်ယူ၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးစစ်ချက်အဖြေတွင် ပိုးတွေ့ပါက ပဋိဆေးဝါးများသောက်သုံးရန် ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်ကိုရယူပါ။ မကုသဘဲထားပါက ရောဂါပိုးသည် ကျောက်ကပ်ထိရောက်သွားနိုင်ပြီး အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါသည်။ ဆေးစစ်ချက်အဖြေတွင် ရောဂါပိုးမရှိဟုပြသသော်ငြားလည်း ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြသသည်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်စစ်ဆေးနိုင်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများတွင် ရောဂါများကိုဆောလျင်စွာ သိစေနိုင်ရုံသာမက မျိုးဥကြွေခြင်းရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်၀န်ရနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမြင့်မားစေနိုင်ပါသည်။ ဤဆီးစစ်ကိရိယာသည် ဆီးအတွင်း၌ဟော်မုန်းမြင့်တက်နေခြင်းရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် အမမျိုးဥအိမ်မှ သားဥများထုတ်နေခြင်းရှိ/မရှိကို သိစေနိုင်ပါသည်။
သတိပြုရန်မှာ သင်သည် 28 ရက်တစ်ကြိမ် ရာသီလာတတ်ပါက ပထမဆုံးရာသီလာသည့်ရက်မှ စတင်ရေတွက်ပြီး 11 ရက်မြောက်နေ့တွင် စစ်ဆေးပါ။ အခြားသူများအတွက်မူ ၎င်းဆေးစစ်ကိရိယာပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ အဖြေသည် အပေါင်းဟုဆိုပါက 24 နာရီမှ 36 နာရီအတွင်း သားဥကြွေရန် အလားအလာများသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
6. ကိုယ်၀န်ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
ကိုယ်၀န်ရှိ/မရှိစစ်ဆေးနိုင်သော ပစ္စည်းကို ဆေးဆိုင်တော်တော်များများတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး မှန်ကန်စွာအသုံးပြုတတ်ပါက တိတိကျကျအဖြေထွက်နိုင်ပါသည်။ ဆီးထဲတွင် ကိုယ်၀န်ဆောင်ဟော်မုန်းရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သဖြင့် တစ်ပတ်ကျော်ကြာသည်အထိ ရာသီမလာပါမှ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
ကိုယ်၀န်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြသ၍ ကိုယ်ဝန်မရှိဟုညွှန်ပြနေပါက နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ပြသ၍ အခြားကိုယ်ဝန်ရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်းအချို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ မှဲ့ (သို့) အစက်အပြောက်များပြောင်းလဲလာခြင်း၊ ကြီးလာခြင်းနှင့် သွေးထွက်ခြင်းများတွေ့ရှိရပါက အရေပြားအထူးကုဆရာ၀န်နှင့် သွားရောက်တိုင်ပင်၍ အရေပြားကင်ဆာဟုတ်/မဟုတ် ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အရေပြားကင်ဆာအမျိုးအစားတော်တော်များများသည် စောစီးစွာသိရှိပါက ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ မိန်းမကိုယ် သန့်ရှင်းကျန်းမာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၂ဝ.၉.၂ဝ၂ဝ | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး